न्यायपालिका कि युद्धपालिका ! « Image Khabar
न्यायपालिका कि युद्धपालिका !
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीचको घम्साघम्सीले न्यायपालिका रणमैदानमा परिणत बन्दै गएको छ ।
एकातर्फ कानुनी व्यवसायीमाथि माङमुंग्री चल्नु अर्कातिर न्यायालय परिसरमा प्रवेश गरी अपरिचित व्यक्तिले कानुनी राजमाथि नै धावा बोल्नुले आन्दोलन थप जटिल बन्दै गएको लक्षण हो । दन्किदै गएको प्रतिशोधपूर्ण आन्दोलनले न्याय पाउने जनताको प्राकृतिक अधिकारलाई थप संकटमा घचेटेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वैकल्पिक प्रवेशद्धारबाट प्रवेश गर्दै आउनुभएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई रोक्न कानुन व्यवसायीले गरेको प्रयासमा भएको धक्कामुक्काले केही प्रहरी र कानुन व्यवसायी घाइते हुन पुगे ।
अरु अन्याय पर्दा न्यायको बाटो देखाउने तिनै वकिल अहिले आफ्नै मानवअधिकार सुरक्षित नभएको भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन् । आन्दोलनले समाधानको बाटो नखोलेपछि आजित वकिलहरू यो प्रकरण नै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने निधोमा पुगेका छन् । उनीहरूले घटनाको अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी संघ संस्थालाई हारगुहार गर्ने निर्णय नै गरेका छन् ।
आन्दोलन एउटा पाटो भयो । अर्कातिर तीन करोड जनताको आशा र भरोसाको तीर्थस्थल मानिने न्यायपालिकामा न्यायको ढोका बन्द भएको चार हप्ता भइसक्यो । न्यायको गजुर मानिने यो थलो अहिले शक्ति संघर्षको अखडा बनेको छ । निशस्त्र जनताका लागि न्याय पाइने यो ठाउँमा गोली, बारुद र लाठीको साम्राज्य छ ।
समस्या समाधानमा कसैको विश्वसनीय प्रयाश देखिदैन । प्रधानन्यायाधीशप्रति लक्षित आन्दोलन प्रकारान्तरमा प्रहरीसंगको मुठभेडमा ठोक्किएको छ । प्रधानन्यायाधीशको समर्थनमा निस्किने प्रदर्शनकारीहरूको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति र शैलीले आन्दोलनको आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।
त्यसैले अराजक भीडबाट न्यायालयलाई जोगाउनु अहिले सबैको दायित्व हो । न्यायालयको त्यो उच्च र सम्मानित गजुर सुरक्षित राखेमात्र नागरिकप्रति सम्मान गरेको ठहर्छ । समयमै ख्याल गरौं, आज बाँस सिध्याएर भोलि बाँसुरीको खोजीमा भौंतारिने दिन नआओस् ।